ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ မသန်စွမ်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ။ - Eden Centre for Disabled Children
by User2| May 14, 2015 | Pojects |0comments
ဤသင်တန်းများမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်သောသူများမှာ –
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကာလအတွင်း များစွာသောမသန်စွမ်းသူများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများကို စိတ်ဝင်စားနေသောသူတို့အား ဧဒင်ရိပ်မြံုမှ လိုအပ်နေသော အကူအညီများကို ပေးလာခဲ့ပါသည်။ ပါ၀င်သောသူများမှာ အလွှာစုံမှ လူတန်းစားမျိုးစုံပါ၀င်ပါသည်။ ဥပမာ –
• ဌာနအသီးသီးမှနိုင်ငံံ့ဝန်ထမ်းများ၊ (အထူးသဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ပညာရေးဌာနမှ မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်နှင့် ဗဟိုအဆင့်ဝန်ထမ်းများ)
• ပြည်တွင်း ပြည်ပ အသင်းအဖွဲ့အသီးသီးမှ ၀န်ထမ်းများ၊
• မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များမှ ၀န်ထမ်းများ၊
• မသန်စွမ်းမိဘများ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်သူများ၊
• ပုဂလိကနှင့် ဘုန်တော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊
• ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်သားများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၊
• ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့မှ ၀န်ထမ်းများနှင့်
• မသန်စွမ်းသူများ ပါ၀င်ကြပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြံုမှပေးနေသော မသန်စွမ်းဆိုင်ရာသင်တန်းများကို ၀န်ဆောင်မှုပိုင်းနှင့် အသိပညာပေးခြင်း အပိုင်းဟု နှစ်မျိုး နှစ်စားခွဲထားပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းများတွင် မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း အနေအထားအမျိုး မျိုးအပေါ်အခြေခံပြီး လိုအပ်နေသော သီးခြားဝန်ဆောင်မှုများ၊ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးဝန် ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြုစုသည့်နည်းပညာများ၊ မသန်စွမ်းမှုအမျိုးအစားများ၊ အခြားလိုအပ်သော မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်ပတ်သက်သော အခြေခံ၊ အဆင့်မြင့်သင်တန်းများကို လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ စနစ်တကျပြုစုပြီး သင်ကြားပေးနေပါသည်။
မသန်စွမ်းမှုအသိပညာပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းများတွင် မသန်စွမ်းအမြင်သစ်၏ အယူအဆများကိုအခြေခံသည့် မသန်စွမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဥပမာ – ရပ်ရွာအခြေပြုပြန်လည် ထူ ထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ လူတိုင်းအကျံုးဝင်ပညာရေး၊ မသန်စွမ်းလှုပ်ရှားမှုအစရှိသည်များ . )၊ နှင့်ပတ် သက်သော သင်တန်းများကိုလည်း လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအောင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ပြင်ဆင် ရေးဆွဲပြီး သင်ပေးနေပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ဖော်ပြသော သင်တန်းများမှာ ဧဒင်ရိပ်မြံုမှ ယခင်က ပို့ချပေးခဲ့ သော၊ လက်ရှိတွင်လည်းပို့ချပေးနေသော သင်ရိုးများဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတုုိင်းသည် လိုအပ်သူများ ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရန်အတွက် အထူးပြင်ဆင်ပေးထားပါသည်။ သင်ယူသူ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အနေအထား အမျိုးမျိုး အပေါ်အခြေခံပြီး အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားပါ သည်။
Disability Awareness Training (DAT) Care Giver Training
Basic Care Giver Training Assistant Teacher Training
Barrier Free Training Therapy Aid Training
Environment Assessment Practical Training for Types of Disabilities
Child Protection Awareness Training Specific Types of Disability e.g. – ASD, CP,
မှတ်ချက်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံအနေဖြင့် မကြာမီ မသန်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်သော ပုံမှန်သင်တန်းများ ပို့ချနိုင် ရန်ကြိုးစားနေပါသည်။ လက်ရှိတွင် တောင်းဆိုသူများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ သင့်တော်သော သင်တန်းများကို ပို့ချပေးနေပါသည်။
ဧဒင်ရိပ်မြံုအနေဖြင့် သင်တန်းများကို စနစ်တကျပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက ်သင်တန်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းများကို စုဆောင်းပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ဖော့ကန်ရှိ ဧဒင်ရိပ်မြံုသင်တန်းခန်းမ တွင်လည်းကောင်း၊ တိုးချဲ့(၂) လမ်း၊ မြောင်းတကာ မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မသန်စွမ်းမှု ဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေး စင်တာတွင်လည်းကောင်း ပို့ချပေးနေပါသည်။
ဆရာ/မများအတွက် လူတိုင်းအကျံုးဝင်ပညာရေးလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း သင်တန်း
ရည်ရွယ်ချက်။ လက်ရှိမသန်စွမ်းကလေးများကို ပြင်ပစာသင်ကျောင်းတွင် လက်ခံပေးပြီး စာသင်ပေးနေသော ဆရာ/မများအား –
(၁) အခြေခံမသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် မသန်စွမ်းမှုအမြင်သစ်အယူအဆ၊
(၂) လက်တွေ့တွင် မသန်စွမ်းကလေးများရင်ဆိုင်ရာနေရသော အတားအဆီးအမျိုးမျိုးကို ဖယ်ရှားနိုင်သည့်နည်းလမ်းနှင့်
(၃) မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းအမျိုးအစားများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားလာနိုင် စေရန်တို့ကို ရည်ရွယ်ချက်ထားပါသည်။
ပါ၀င်တက်ရောက်သူများ။ ဤသင်တန်းနှင့် သင်ရိုးများကို ကျွမ်းကျင်သူနှင့် ဆရာဖြစ်သင်တန်း ဆင်းဆရာ၊ ဆရာမများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်။ ပင်မကျောင်းမှဆရာ၊ ဆရာမ များသာမက ပြင်ပကျောင်း၊ ဘုန်တော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းနှင့် ဘာသာရေးကျောင်းများမှဆရာ၊ ဆရာမများ၊ မသန်စွမ်းကျောင်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမများပါ၀င်တက်ရောက်ကြပါသည်။
သင်တန်းကြာချိန်။ အထက်ဖေါ်ပြပါသင်တန်းများသည် အနည်းဆုံး (၅) ရက် (သင်တန်းချိန် (၃၀) နာရီလိုအပ်ပါသည်။ ဤသင်တန်းများကို (၈) ရက်မှ (၁၀) ရက်အထိ တိုးချဲ့ပြီးလည်း အသေးစိတ်၊ လက်တွေ့နှင့်အကွ ပို့ချပေးလိုရပါသည်။ သင်ရီုးကိုအခေခြံသောကြောင့် သင်တန်းသည် (အချိန်ပိုင်း ဖြစ်ပါက) သုံးလေးပတ်အထိ ကြာသွားနိုင်ပါသည်။
ပို့ချသူများ။ ဧဒင်ရိပ်မြံုအနေဖြင့် မိမိအတွေ့အကြံုများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများနှင့် ဧဒင်ရိပ်မြံုသို့တက်ရောက်နေကြသော မသန်စွမ်းကလေးများကိုအခြေခံပြီး မသန်စွမ်း မှုနှင့် ပတ်သတ်သောသင်တန်းများကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက တောင်ဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေး ရင်း မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးအဖြစ် ၂၀၀၁ ခုနှစ် လောက်က တည်းက စတင်ကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းပို့ချသူများသည် ဧဒင်ရိပ်မြံုတွင် မသန်စွမ်း ကလေးများကို လက်တွေ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြသော ဆရာမများမှ ကူညီပေးနေကြပါသည်။ ပြင်ပ ပညာရှင်များနှင့် ပို့ချသူများကို လည်းလိုအပ်သလို ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။
ပို့ချသည့်နည်းစနစ်။ ။သင်တန်းပို့ချသည့်နည်းစနစ်များသည် သင်တန်းပို့ချခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊ ဗီဒီယိုခွေများပြသခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အုပ်စုခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကစားနည်းများနှင့် လက်တွေ့ မသန်စွမ်းကလေးများ ကိုင်တွယ်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ တက်ကြွစွာပါဝင်သင်ယူခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းများဖြင့် သင်တန်းသားတိုင်းမှ ပါဝင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားပါသည်။
အရင်းအမြစ်နှင့် ပံ့ပိုးမှုများ။ ။ဧဒင်ရိပ်မြံုတွင် စာကြည့်တိုက်နှင့် အရင်းအမြစ်စင်တာ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ စာအုပ်ပေါင်း ထောင်ကျော်ရှိပြီး ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ အင်တာနက် များဖြင့်လည်း လွယ်ကူထိရောက်စွာ သင်ယူနိုင်ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြံုအနေဖြင့် ပြင်ပဒေသ နယ်များသို့ လည်းသွားရောက် သင်တန်းပို့ချနိုင်သည့်အပြင် သင်တန်းလိုအပ်ချက် စစ်တမ်းများကိုလည်း ကြိုတင် ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းကြေး။ သင်တန်းကြာချိန်နှင့် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သင်တန်းကြေးအမျိုးမျိုးရှိနေ ပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြံု အနေဖြင့် စီမံချက်များ၏ ပ့ံပိုးမှုဖြင့်အခကြေးငွေမယူသောသင်တန်းများရှိသလို ဧဒင်ရိပ်မြံု ပရဟိတလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် ရံပုံငွေရှာဖွေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် သတ် မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများကို ရယူသည့် သင်တန်းများလည်းရှိပါသည်။
သင်တန်းကြာချိန်အမျိုးအစားနှင့် တက်ရောက်သူများ၏ အနေအထားအပေါ်အခြေခံပြီး အသင့်တော်ဆုံးသောသင်ရိုးများရေးဆွဲပြီး၊ လို့အပ်ချက်များကိုဖြည့်စီးပေးနိုင်မည့် သင်တန်းများကို ပြင်ဆင်ပို့ချပေးနိုင်ပါသည်။